FAQ | Ningbo Chinahong Traffic Equipment Co., Ltd.
Wiper Blade manokana
Blade Wiper aoriana
Ny vidintsika dia mety miova arakaraka ny famatsiana sy ny anton-javatra hafa amin'ny tsena. Rehefa avy nifandray taminay ny orinasanao raha mila fampahalalana bebe kokoa dia handefa lisitra vidiny nohavaozina izahay.
Eny, mazàna izahay dia mitaky habetsahan'ny kaomandy farany ambany ho an'ny baiko iraisam-pirenena.
Afaka manome angon-drakitra momba ny kalitaon'ny vokatra mifandraika ve ianao?
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny vokatra izahay, ao anatin'izany ny famakafakana angona data momba ny kojakoja ao amin'ilay vokatra;
Ho an'ny santionany dia 7 andro eo ho eo ny fotoana itarihana. Ho an'ny famokarana betsaka, ny fotoana fandefasana dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola. Ny daty fandefasana dia manan-kery aorian'ny (1) mahazo ny petra-bolanao izahay ary (2) manana ny fankatoavana farany ny vokatrao izahay. Raha tsy mifanaraka amin'ny fe-potoana farany ny fotoana fanaterana anay dia mba fenoy ny fepetra takinao amin'ny varotra. Amin'ny tranga rehetra, hiezaka ny fara herinay izahay hanomezana izay ilainao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Iza amin'ireo fomba fandoavam-bola no ekenao?
Azonao atao ny mandoa vola amin'ny alàlan'ny kaonty banky anay, Western Union na PayPal:
30% ny petra-bola aloa aloa mialoha, izay 70% raha oharina amin'ny fifandanjan'ny kopian'ny volavolan-dalàna.
Ianao ve manome toky ny fandefasana vokatra azo antoka sy azo antoka?
Eny, mpanamboatra isika, ary ny tenanay dia afaka mifehy azy.
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny safidinao ahazoana entana. Ny fandefasana entana no vahaolana tsara indrindra amin'ny habetsahana be. Ny saran'ny fandefasana marina, izahay dia afaka manome anao ny fampahalalana amin'ny antsipiriany aorian'ny fahafantarana ny habetsahana, ny lanja ary ny fomba. Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Ahoana no hamahana ny fanavaozana ny fonosana vokatra?
Amin'ny ankapobeny, raha be loatra ny stock, dia hifandray amin'ny fonosana ivelany amin'ny vokatra izahay, ary tsara indrindra ny mampahafantatra antsika mialoha.
Phone+86 574-8655 0966
AddressMinlian Village, Guisi Street, Distrikan'ny teknolojia avo lenta, Tanànan'i Ningbo, faritanin'i Zhejiang, Sina
Fotoana miasa08:30 ~ 17:30 Moday hatramin'ny Sabotsy
Blade Wiper manokana, Ford Edge Rear Wiper Blade, Bus Wiper Blade Ho an'ny Volvo, Windscreen Wiper ho an'ny fiara, Windshield Rear Wiper, Wiper Blade manokana,